Ulo oru mbo na mmuta akwukwo nke UNWTO nleta di elu na Tunisia
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Ulo oru mbo na mmuta akwukwo nke UNWTO nleta di elu na Tunisia
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • investments • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ kacha ọhụrụ na Tunisia • Akụkọ dị iche iche
Onye odeakwụkwọ ukwu nke Tourtù Na-ahụ Maka Njem Nleta Worldwa (UNWTO) zutere HE Kais Saied, Onye isi ala nke Tunisia, na Mịnịsta Ala Hichem Mechichi nke Tunisia n'oge nleta dị elu na mba North Africa. Nleta nke abụọ a na otu mba Africa n’etiti izu atọ gosipụtara nkwenye UNWTO maka ịmalitegharia njem nlegharị anya na kọntinent niile ma lekwasị anya na ya na ndị gọọmentị na-arụkọ ọrụ iji kwalite mmepe na-agbanwe agbanwe na ihe ọhụrụ.
Onye ode akwukwo ukwu Zurab Pololikashvili kelere Onye isi ala Saied na ndi ochichi ya maka nkwado siri ike ha nyere maka njem nleta n’oge a siri ike. Isi nzuko nke nzuko a di elu bu ichoputa uzo UNWTO nwere ike isi kwado Tunisia ka o na-enye ikike ikike ndi njem iji kwalite mmepe. N'akụkụ nke a, Secretary General na ndị ọchịchị Tunisia tụlere mmekorita UNWTO na European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), yana oru ngo nke ugbu a na-enye nkwado teknụzụ iji mee ka mgbake nke mpaghara ndị njem njem nke Tunisia na mbute ọrịa ahụ.
Ọnụ maka imekọ ihe ọnụ n'ọdịnihu
Onye odeakwụkwọ ukwu Pololikashvili kwuru, sị: “Tunisia bụ ihe atụ nke mba na-etinye ego nke ọma na njem nleta na ịnwe ike pụrụ iche nke ngalaba ahụ iji kwalite mmepe na ịmepụta ọtụtụ ohere. Ana m ekele Onye isi ala Saied maka nnabata ọbịa ya na nkwado gọọmentị na-enye maka njem nleta na gburugburu ọrịa na-efe efe.
Na mgbakwunye na nzukọ ahụ na Onye isi ala na Mịnịsta Ala, ndị nnọchi anya UNWTO nwekwara mkparịta ụka na Mịnịsta ndị njem na njem nlegharị anya na Tunisia bụ Habib Ammar iji kpaa maka atụmatụ maka njikọta ugbu a na nke ọdịnihu. N’egosipụta isi ihe dị mkpa nke idu ndú UNWTO, mkparịta ụka a lekwasịrị anya n’ụzọ dị iche iche iji bulie njegharị na-adigide ma mepụta ọrụ site na ihe ọhụrụ, agụmakwụkwọ na itinye ego, yana njem maka mmepe ime obodo.
Etinye ego maka ọdịnihu nke Africa
Na-egosiputa isi ihe ndi UNWTO choro, nke kachasi ike itinye aka n'inwe onyinye na ikwalite mmuta, onye ode akwukwo akwukwo kwuru okwu na oghere nke ulo ogwu nke ndi Tunisia. Emere nzukọ a na Carthage High Commerce Studies Institute (ma ọ bụ IHEC Carthage), ụlọ akwụkwọ azụmaahịa mbụ na nke kachasị ama na Tunisia.
Ngalaba ọrụ, nke gụnyere njem nleta, bụ otu n'ime ngalaba akụ na ụba abụọ maka Tunisia. Dabere na data UNWTO, ebe ndị Africa nwetara rutere 99% na mbata ndị njem mba ofesi na nkeji nke abụọ nke 2020 ma e jiri ya tụnyere 2019. Na-arụkọ ọrụ ọnụ n'akụkụ ndị otu na mpaghara si na kọntinent ahụ, UNWTO ewepụtala Agenda 2030 ya maka Africa iji gosipụta mmetụta nke ihe Covid-19 ọrịa na-efe efe ma nyere aka mee ka mgbake dịgide.